Over 15 years of packaging and printing industry experience, factory price. Custom paper box, gift box, စက္ကူအိတ်, foldable paper box, မြှောင်းပုံသေတ္တာ, shipping box.
Guangzhou Ouhai ပုံနှိပ်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီ, Ltd
A professional factory for paper bag , စက္ကူဘူး, လက်ဆောင်သေတ္တာနှင့်မြှောင်းပုံသေတ္တာ, was founded in 2005, withagroup of more 15 years of packaging and printing industry experience. ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်အတူတင်းကြပ်စွာ, စီးပွားရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပါ, ဒေသတွင်း၌ဖောက်သည်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်, ဖောက်သည်များသူတို့၏ဆန္ဒပြည့်စုံစေရန်ကူညီရန်မှာကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်.
We pay much attention to product quality, with own factory in Baiyun district, ကွမ်ကျိုး, accept custom orders, provide reliable products and thoughtful service for customers to expand regional marketing.
စက္ကူထုပ်ပိုး, စျေးဝယ်, ချောကလက်, ဝိုင်, အလှကုန်, ရေမွှေး, အဝတ်အထည်များ, လက်ဝတ်ရတနာ, လက်ဆောင်နေ့စဉ်ကုန်စည်, အီလက်ထရောနစ်, အိမ်များထုတ်ဝေခြင်း, လက်ဆောင်ကစားစရာများ, နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များ, အထူးပစ္စည်း, ပြပွဲ, ထုပ်ပိုး, သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း, စသည်တို့.